NextMapping | Mustaqbalka Shaqada | Cheryl Cran
Sidee NextMapping™ shuqullada
Isticmaalida xeeladaha muhiimka ah ee kaa caawinaya inaad dhex marato mustaqbalka shaqada - waxaan kaa caawinaynaa inaad khariiddada ka dhigto waxa xiga ee shirkaddaada, hoggaamiyeyaashaada iyo kooxahaaga oo aan qorsheyno waxa la sameyn lahaa mustaqbal diyaar ah hadda.
Cidda aan caawinno
Hoggaamiyayaashu diyaar ma u yihiin waxa xiga? Hoggaamiyayaashu ma leeyihiin 'xirfado mustaqbal' oo ay ku hogaamiyaan isbeddelada loo baahan yahay si halkaas loo gaaro? Waxaan haynaa xalka isku dhafan ee ka caawinaya hogaamiyaasha inay mustaqbalka diyaar u ahaadaan.
Kooxuhu miyuu dhib badan yahay oo hal-abuurnimo? Waxaan haynaa aalad gacan ka geysata inay kooxaadiinu noqdaan kuwa isbadal ku sameyn kara hogamiyayasha abuurista waxa xiga ee mustaqbalka.
Miyaad mustaqbal ganacsade diyaar u tahay? Haddii aad tahay ganacsi aasaasay ama bilaw waan kaa caawin karnaa inaad khariiddada ku xigto.
Adeegyada istiraatiijiyadeed ee aan bixinno
Baro baahida iyo waqtiga dhabta ah.
Koorsooyin fiidiyow ah oo iskiis u furan oo ikhtiyaar u leh inuu la shaqeeyo NextMapping™ Tababaraha.
Ku caawi hoggaamiyeyaashaada iyo kooxahaaga inay mustaqbalka diyaar u noqdaan hadda xirfadaha iyo istiraatiijiyaddi ugu dambeysay.
Dhiirrigelinta, cilmi baarista, istaraatiijiyadaha la istcimaali karo iyo waxyaabaha gogoldhigga ah waa waxa aad heshid marka aad la shaqeyso Cheryl Cran adoo ah oraah furahaaga u ah munaasabadda dalxiiska ama munaasabada nool. Habayn iyo is-dhexgal leh.
Waqtiyada aan la hubin waxay u baahan yihiin ilaha ugu fiican ee hogaamiyayaasha iyo kooxaha. Kala shaqeyso shahaadadeena NextMapping ee la xaqiijiyay™ tababarayaasha kor u qaadaya xirfadaha hogaaminta, kordhinta fikirka istiraatiijiyadeed iyo hagaajinta waxtarka shaqaalaha fog.
Shirkad la-talin oo heer sare ah waxaan la shaqaynaa ganacsatada yar yar illaa kuwa dhexdhexaadka ah iyo ganacsatada si mustaqbalka loo caddeeyo ganacsiga
oo la dhiso faa'iidooyin tartan, si loogu wanaajiyo xaqiiqada shaqada fog fog loona hirgaliyo hoggaanka isbeddelka.
75% ee maareeyaha guud ayaa sheegaya in la'aanta shaqaale xirfadlayaal ah ay tahay farqi weyn oo mustaqbalka u diyaarsan sidii urur ahaan.
Marka xigta NextMapping™ Waxaan bixinaa xulashooyin tababbar kala duwan iyo habab lagu caawinayo biriijista farqiga xirfadaha ee hoggaamiyeyaashaada iyo kooxahaaga.
Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in hogaamiyaasha iyo ganacsatada ay helaan aragti istiraatiiji ah oo dheeri ah, fikradaha la adeegsan karo iyo xalalka hal abuurka ah
markii aad ka qaybqaadanayso kooxo isku fil ah. NextMapping noo gaar ah™ Dib-u-noqoshadu waa codsi kaliya.
La soco cusbooneysiinta ugu dambeysa
Sida loo abuuro oo loo hal-abuuro xawaaraha isbeddelka
Mustaqbalka guusha shaqo kuma xirna hal ama laba 'geesiyaal' ganacsiga - mustaqbalku wuxuu ku saabsan yahay 'annaga' iyo sida loo soo saaro oo loo abuuro xawaaraha isbeddelka.
Ballanso hadda 50%
Muhiimadda magac-u-qorista inta lagu jiro qalalaasaha iyo sida loo qiimeeyo ganacsigaaga
Cheryl waxay kala hadashaa Brad Breininger, iskaashatada iyo hogaamiyaha istaraatiijiyadda ee Zync oo ku saabsan mustaqbalka sumadaynta iyo midda cusub ee caadiga ah.
Bal hada daawo
Generation Covid Iyo Mustaqbalka
Generation Covid iyo mustaqbalka …… Waxaa jira jiil cusub oo magaalada jooga - Generation Covid oo sidoo kale loo yaqaan Gen C. oo ay ku jiraan dhalinyaro ka yar labaatan sano. Waxaa laga yaabaa inaad aqoon u leedahay jiilasha kale: Gen Z 1997 ilaa 2020 (ogow inuu yahay jiilka warbaahinta bulshada) Millenials 1981 ilaa 1996 (oo la yaqaan […]
NextMapping ™ Blog - Akhri wax dheeraad ah
94% hogaamiyaasha caalamiga ah ee la daraaseeyay ayaa ah kuma qanacsana iyadoo waxqabadka hal-abuurnimadooda ah.
77% ee shaqaalaha raba dadka marka hore - labaad dijital ah sida istiraatiijiyad muhiim ah oo loogu beddelo ganacsiga mustaqbalka.
16% ee shirkadaha sheegta inay yihiin ku guuleysan isbadal dijital ah dadaal.
70% Shirkadaha waxay sheegaan in ma samayn mustaqbal hibo u leeyihiin.
Dhowr ka mid ah macaamiisha aan jecel nahay inay la shaqeeyaan